‘केपी ओली नक्कली राष्ट्रवाद आडमा विदेशीको दलाल, प्रतिगमनका मतियारहरू दण्डित हुनैपर्छ’ (अन्तरवार्ता)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने गरी संसद् विघटन गरे। त्यसपछि ओलीको कदमको सवत्र्र विरोध शुरु भयो। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष नेतृत्व ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रियो। यसबीचमा नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूले देशव्यापी रुपमै विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा उक्त संगठनका केही विद्यार्थी नेता ओलीको बचाउँमा लागे। अनेरास्ववियूका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सहसंयोजक एवं नेकपाका युवा नेता रञ्जित तामाङसँग ओलीको कदमपछि परिस्थिति र आगामी रणनीतिका सन्दर्भमा नेपाली पब्लिकले गरेको संवादः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा अनेरास्ववियूले आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी अघि बढाइरहेको छ?
–अनेरास्ववियूले प्रतिगमनका विरुद्धमा सडक संघर्ष गरिरहेको छ। प्रतिगामी कदम कुनै पनि मूल्यमा फिर्ता नहुँदासम्म हामी संघर्ष जारी राख्ने छौं। देशभरि प्रदर्शन, मसाल जुलुस र भण्डाफोर लगायतका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एक अध्यक्ष ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमपछि पार्टीका तर्फबाट कस्तो एक्सन लिने कार्य भइरहेको छ?
–यतिबेला सिंगो देश नै प्रतिगमनका विरुद्धमा उत्रिएको छ। कोही सडकमा, कोही सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रतिगमनको विरोधमा उत्रिएका छन्। जनमत र जनअपेक्षाको कुठाराघात भएपछि आमनागरिक पनि विभिन्न ढंगबाट संघर्ष गरिरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसैले प्रतिगमनको प्रतिरोध गर्ने सवालमा नेकपा कमजोर भएको छैन। बरु नेकपाले केपी ओलीको सत्तालाई, अलोकतान्त्रिक कदमलाई, ओलीको सरकारलाई र असंवैधानिक ‘कू’लाई कसरी खारेज गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छ। अहिले सडकमा सामान्य झिल्कोजस्तो प्रदर्शन देखिएको छ। यो एक प्रकारको ट्रेलरजस्तो मात्रै हो। अब नेकपा र आमनागरिक केपी ओलीको असंवैधानिक ‘कू’का विरुद्धमा कसरी आक्रामक ढंगले उत्रिन्छन् भन्ने निकट समयमा देखिने छ, थाहा हुने छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकाय र अदालतमा प्रभावमा पारेर त्यसको औचित्य पुष्टि गराउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ? र, यसो भएमा अनेरास्ववियूको रणनीति कस्तो हुने छ?
–अनेरास्ववियूले केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक ‘कू’विरुद्ध पहिलो दिनदेखि नै आवाज उठाउन थालेको हो। यदि कुनै संवैधानिक निकाय वा अदालत नै पनि ओलीको असंवैधानिक ‘कू’को कलंकको टिका लगाउन तयार भए भने अनेरास्ववियूले तिनीहरूको भण्डाफोर गर्छ। र, जनताले प्रतिगामीहरूलाई र अग्रगमनका विरुद्धमा लाग्नेहरूलाई त इतिहासमा पटक–पटक सजाय गरेको छ। कतिपय संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र विधिको शासनलाई प्रतिकुल हुने गरी काम गर्दा देशमै बस्न नसक्ने गरी बिदा भएका उदाहरणहरू छन्। प्रतिगमनका मतियारहरू जनताबाट दण्डित हुन्छन्। अहिले पनि त्यस्तो कुनै कदममार्फत् प्रतिगमनलाई साथ दिएमा उनीहरू जनताबाट दण्डित हुने छन्। त्यसैले अनेरास्ववियूले केपी ओलीसँग सति जाने, कलंकको टिका लगाउनेलाई कुनै पनि मूल्यमा छोड्दैन। जनताको कठघरामा उभ्याएर जनताबाटै दण्डित गर्ने वातावरण तयार गर्छ।
पार्टीको बहुमत र यति ठूलो जनदबाब हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली अलिकति पनि टसमस नहुनुको कारण के हुन सक्छ? यसमा बाह्य शक्तिको भूमिकाको आशंका कतिको जायज हुनसक्छ?
–स्वाभाविक रुपमा बाह्य शक्तिको प्रभाव छ। केपी ओलीको जिन्दगी नै हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत जस्तो छ। देखाउने छवि राष्ट्रवादी, तर भित्री रुपमा जहिल्यै पनि विदेशीको दलाल र गोटी बनेको इतिहास छ। यस पटकको असंवैधानिक कदम पनि शक्तिकेन्द्रहरूको इन्ट्रेसमा भएको छ। शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउन, तिनीहरूको मतियार र गोटी बन्न असंवैधानिक कदम चालिएको कुरा स्वाभाविक रुपमा पुष्टि भएको छ। यद्यपि, नेपाली जनताले अहिले केपी ओलीबाट भएको असंवैधानिक ‘कू’ गरेर संविधानको हत्या गर्ने चेष्टा गरे, यस्ताका विरुद्धमा अग्रगामी क्रान्तिको बाटो तय गर्ने नै छन्। ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको वास्तविकता पनि जनताले बुझिसकेका छन्।
#नेपाल_कम्युनिष्ट_पार्टी #पुष्पकमल_दाहाल_प्रचण्ड #अनेरास्ववियू #रञ्जित_तामाङ #सहसंयोजक
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १४, २०७७ ००:३२